Ampidino Kill the bug APK ho an'ny Android
Ampidino Kill the bug
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Android (37.00 MB)
Ampidino Kill the bug,
Kill the bug game dia lalao simulasi angano izay azonao lalaovina aminny fitaovanao aminny rafitra fiasa Android.
Ny lalitra dia nahazo ny hozatra hatrizay taminny fotoana sasany taminny fiainantsika. Miaraka aminny feonizy ireo sy ny fipetrahany tsy tapaka, nampahatezitra antsika rehetra izy ireo. Ary koa, satria mpandatsa-drà izy ireo dia mamela ny kaikitika izay hiteraka mangidihidy. Aminny tranga toy izany dia mitady vahaolana izahay hanalana azy ireo.
Aminity lalao ity dia nolalaovinizy ireo ny iray aminireo vahaolana ireo taminny fanaovana azy io ho mahafinaritra. Aza adino fa kilalao fotsiny ity. Atsipintsika ilay moka noforoninay taminny alàlanny famintinana ilay taratasy taminny moka. Manana 3 ianao. Ary tsy maintsy mitifitra moka 3 ianao. Raha tsy mamely ianao dia resy ny lalao. Ao an-trano, ao an-dakozia, any aminny birao, any an-dakilasy na any aminny cafe ... Lalao immersive izay ahafahanao milalao aminny toerana maro ary mitohy ny fitsangatsanganana nefa tsy miadana.
Azoko antoka fa hofehezinao izany rehefa manohy milalao ianao, na dia miady aminny dingana voalohany aza ianao. Azonao atao ny ho lasa tompon-daka aminny maha mpilalao mahay indrindra anao. Eto aho miaraka aminny lalao mahafinaritra izay tsy tianao hapetraka. Raha te-ho mpiara-miasa aminity traikefa nahafinaritra ity ianao dia azonao atao ny misintona ilay lalao maimaimpoana aminny findainao.
Kill the bug Specs
Haben'ny rakitra: 37.00 MB